AnyTrans 8 inokutendera kuti uchinje zviri nyore kubva kune imwe iPhone uchienda kune imwe | Ndinobva mac
Iyo nyowani AnyTrans 8 inotibvumidza kuendesa zviri nyore zvirimo kubva kune imwe iPhone kuenda kune imwe
Mazuva mashoma apfuura, Apple yakaratidza chizvarwa chitsva che iPhone chegore rino: iPhone 11. Iyo iPhone 11 inoumbwa nematatu matemu: iPhone 11, iPhone 11 Pro uye iPhone 11 Pro Max. Iyo iPhone 11 ndiyo inotsiva iyo iPhone XR, chinongedzo icho Apple yatengesa sechurros mugore rese rino, nekuda kwemutengo wayo wakaderera.
Kana iyo iPhone XR yanga yatove yakanakisa terminal, nekumisikidzwa kweiyo iPhone 11 zviri nani. Uye yakachipa, sezvo Apple yakadzikisa mutengo wayo. Kana iwe uri kufunga nezve kutora iyo nyowani iPhone 11 kana mamwe ePro mamodheru uye iwe hauzive kuti sei chinja zvemukati kubva kune imwe iPhone uchienda pane imwe, isu tinotsanangura maitiro ekuzviita nekukurumidza uye nyore neAllTrans.
Kana isu tichivandudza yedu iPhone, ndiyo nguva yakanakisa yekuchenesa yedu terminal, kubvisa ese iwo mafomu atisingashandise uye anga achigara achitora nzvimbo pane yedu terminal. Nekudaro, isu tine rumwe ruzivo, senge mifananidzo uye mumhanzi izvo tinoda kuramba tichienda kuchinhu chitsva.
Ita izvi ne iTunes zvinoda moyo murefu, sezvo maitiro ese achiitwa pamwe chete, kuteedzera zvese zvirimo kubva kune chimwe chinhu kuenda kune chimwe, pasina kutibvumira kubvisa ruzivo rwatisingade kuchengeta. Kudzima maapplication atisingadi kuramba tiri pane iyo nyowani iPhone hakungobatsire chete kuizadza nemarara mune mafaira, asi tiri kudhonza zvese izvo zvatakaunganidza.
1 Kuchinja iPhone kuri nyore kwazvo neAllTrans
1.1 Foni kune iPhone
1.2 Negadziriro yeparutivi kuna iPhone
1.3 Gore ku iPhone
2 App inowanikwa ye iPhone
Kuchinja iPhone kuri nyore kwazvo neAllTrans
Apa ndipo apo AnyTrans inova chishandiso chatinofanira kufunga nezvacho kana kana kana, zvirinani kana tichida iyo kuchinja kubva kune imwe iPhone kuenda kune imwe kunoitika pasina kudhonza junk uye kugona kusarudza chaizvo izvo zviri zvemukati izvo isu zvatinoda kutaura nezvazvo uye ndeipi yatiri kuda kubvisa.
Paunenge uchiita shanduko kubva kune imwe terminal kuenda kune imwe, AnyTrans inotipa sarudzo nhatu, kuti maitiro acho asununguke uye nekukurumidza kune vashandisi: Runhare ku iPhone, negadziriro yeparutivi kuna iPhone uye Cloud kuna iPhone.
Foni kune iPhone
Iri basa rinotibvumidza isu kuendesa izvo zvemukati medu iPhone yekare kune imwe nyowani. Maitiro ekuzviita akapusa, sezvo isu tichifanira chete batanidza maPhones maviri kune komputa uye sarudza kuti ndechipi chishandiso chichava sosi yedhata uye ichave iri kuenda.
Tevere, hwindo rinoratidzwa mune yatinofanira sarudza zvemukati zvemapurogiramu kuti isu tinoda kuendesa chero mimhanzi, toni, manotsi manzwi, odhiyo mabhuku, podcast, mavhidhiyo, mapikicha uye mavhidhiyo, mabhukumaki, manhamba, mabhuku ...
Kana isu tisingade kusarudza imwe neimwe, tinogona kubaya bhokisi Sarudza zvese pamwe neiyo ye Darika zvakapetwa, kudzivirira kudzokorora zvirimo zvinogona kutowanikwa pane iyo iPhone inogamuchira iyo data. Pakupedzisira, tinya pane Inotevera kutanga maitiro, maitiro ayo Zvinogona kutora yakawanda kana shoma nguva zvichienderana nehuwandu hwe data isu hwatinofanira kuchinjisa.
Negadziriro yeparutivi kuna iPhone
AnyTrans inotibvumidzawo kuti tigadzire nguva nenguva ye iPhone yedu, kuti tigare tiine kopi yezvose zvirimo zvakachengetwa pane yedu kifaa. Chinhu chakanaka icho chikumbiro ichi chinokupa iwe, pachinzvimbo cheTunes, ndizvozvo inotibvumidza kudzoreredza zvirimo, chimwe chinhu chatisingakwanise kuita muTunes, nekuti isu tinogona kungorasa backup yatakamboita tisina kusarudza zvemukati.
AnyTrans inotipa maviri ekuita maitiro aya:
Full negadziriro yeparutivi - Inoita backup yakazara neese data.
Kuwedzera backup - Inosimudzira zvese zvinyorwa zvitsva zvakawedzerwa kuchishandiso kubva kopi yekupedzisira.
Kugadzira kopi yekuchengetedza yecomputer yedu hazvidiwe kuti ubatanidze iPhone yedu kuMac, kubvira tinogona kuzviita kuburikidza nehukama hwedu hweWi-Fi tisina isu kuziva. Iri basa rakanakira kugadzira makopi ekuwedzera echishandiso chedu. Kana isu tichigara tichida kuita izere negadziriro yeparutivi yefoni yedu, chakanakisa uye chinokurumidza chinhu kuzviita kuburikidza netambo yakabatana neMac.
Gore ku iPhone
Maitiro echitatu ayo AnyTrans anotipa ekuchinjisa zvemukati kubva kune imwe kifaa kuenda kune imwe kuburikidza neICloud. Kana isu takamutsa iCloud kugadzira backup makopi uye sync zvinhu zvakachengetwa pa iPhone Negore reApple, isu tinokwanisa kuwana iwo iwo ruzivo rwakachengetwa paiyo iPhone kubva pawebhu icloud.com.
Kana tichida kuendesa ruzivo rwese rwakachengetwa muICloud kune yedu nyowani iPhone, neAllTrans tinogona kuzviita nenzira yakapusa sezvo ichitibvumidza kurodha pasi zvese zvirimo zvakachengetwa mugore kumidziyo yedu uye kubva kumidziyo yedu kuchinjisa iyo iPhone nyowani. AnyTrans inotibvumidza isu kusarudza izvo zvemukati zvatinoda kurodha, chero kutaurirana, karenda, mapikicha uye mavhidhiyo, zviyeuchidzo uye zvinyorwa.
Nekuodhaunirodha zvese zvirimo kubva kuICloud kuenda kukomputa yedu, zvinotibvumidzawo kusarudza kuti ndeapi mhando yezvinhu zvatinoda kuchengeta iyo iPhone nyowani, kuitira maneja yemahara nzvimbo yatinayo. Iyi sarudzo haisi inowirirana neICloud chete asi inowanikwawo kune vashandisi veGoogle Drive.
App inowanikwa ye iPhone
Iko kunyorera kweIOS kunotipa akateedzana emabasa ayo kusvika parizvino anga ayambuka pfungwa dzedu dzinogona kuwanikwa Kutenda kune AnyTrans application yeIOS, inowanikwawo paApple, tinogona tumira chero rudzi rwefaira kune chero smartphoneZvichida iPhone kana Android.
Uye zvakare, inotibvumidzawo kuti tigadzirise zvirimo zvemidziyo yedu kuburikidza newebhu uye nekugona tumira chero faira kuPC kana Mac usingatombofaniri kuita zvekutumira mameseji, maemail, uchiaisa kune iro gore ...
Rimwe remabasa arinotipa ndiyo kuwana kune akasiyana masevhisi ekuchengetedza mugore iro ratinoshandisa nguva dzose uye rinotibvumira kutevedzera nekufambisa mafaira nekukurumidza uye nyore.
Unogona download AnyTrans zvachose mahara yeIOS kuburikidza AnyTrans yepamutemo webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Iyo nyowani AnyTrans 8 inotibvumidza kuendesa zviri nyore zvirimo kubva kune imwe iPhone kuenda kune imwe
Iyo Goridhe Master vhezheni yeTVOS 13 yave kuwanikwa